Posted by wai lin Tun at 10:40 PM Labels: ကဗျာ
အကိုကြီးရဲ့ ကဗျာကို ဦးဦးဖျားဖျား ဖတ်ရူသွားပါတယ်။
ကဗျာဆရာ ရပ်ကြည့်နေတာတော့ တွေ့လိုက်တယ်
ဒါဆို.. ကြယ်လေးကို ဒီတိုင်းပဲ ထားခဲ့တာလား။
ပုံလေး ကိုယ့်ဘာသာ ဆွဲထားလား လေးထောင့်တွေထဲမှာ အ၀ိုင်းက တစ်ခုထဲ။
ကဗျာဆရာ ကြီး နောက်တယေက် ဘန်နာ ပြောင်းထားပြန်ပြီ။ ( ဘာတွေဖြစ်နေပါလိမ့်)း)
၃ ကြောင်းထဲပေမဲ့.. မမြင်နိုင်လောက်အောင် နက်ရှိုင်းပါတယ်။ ဒါပါပဲ..ကဗျာဆိုတာ..ကဗျာဆရာဆိုတာ..
ma kaung buu! thar mamn par!
အဲဒီလို မနင်းရက်ပဲ ထိန်းချူပ်ခဲ့တဲ့ စိတ်ရဲ့ တည်ငြိမ်မှုအလှကို ကဗျာထဲမှာ တွေ့ လိုက်တယ်…